China Down ibhatyi mveliso kunye nabenzi | Ngomhla
1. I-100% yelaphu ye-Nylon ene-mylar thermal Lining
2. I-LIGHTWEIGHT & FREATHABLE FABRIC-Isiphunga isixhobo sokukhanya esingaphezulu, ukutyabeka okunganyangekiyo kwamanzi, ilaphu leyiloni elitofotofo kunye nokutywina komphetho kwimfudumalo. Inomgangatho ogqwesileyo wokugcina umoya kunye nokugcina ukufudumala, qinisekisa ukuba uya kukwazi ukonwabela ukufudumala okukhethekileyo ngelixa ugcina ukusebenza kwakho kwincopho ngeendlela ezininzi ngokuhamba okungathintelwanga!
3. I-SMART HEAT ACROSS BODY- Fudumeza ngokukhawuleza ngemizuzwana, izinto ezi-3 zokufudumeza ikharbhon zivelisa ubushushu kwimimandla yomzimba (ekhohlo nasekunene esiswini, embindini womva); Lungisa useto lokufudumeza (Phezulu, phakathi, phantsi) ngonqakrazo olulula lweqhosha.
4. U-2021 UYILO OLUHLAZIYIWEYO: I-mylar thermal Lining entsha inesikhumba, yeyona nkqubo ifanelekileyo yokufudumeza ikhabhoni, iqinisekisa ukuba awulahlekelwa bubushushu obagqithisileyo kwaye uyakonwabela ukufudumala kunamanye amalaphu ashushu kwimarike.
5. INKQUBO YOKUQALA- Umgangatho ophezulu wehardware kunye neeziphu ezingangeni manzi, iipokotho zokufikelela ngokulula kunye ne-hood enokutsalwa yenzelwe ngokukodwa ukubanda kusasa kunye nokhuselo olongezelelekileyo kwiintsuku ezinomoya. Isipho esifanelekileyo seKrisimesi samalungu osapho, abahlobo, abasebenzi.
6. KOMATSHINI KWI-WASHABLE-Iphakheji ibandakanya i-1 * isinxibo eshushu se-unisex, ipakethe yebhetri eyi-1, ibhokisi yesipho e-1, i-1 * ibhegi yokuhlamba iimpahla, i-1 * Ishaja kunye ne-1 * ibhegi engenamanzi.
I-LIGHTWEIGHT & FUTHI YOKUPHEPHA-Ukuphefumla ukukhanya kokukhanya okungafunekiyo, ukutyabeka okunganyangekiyo kwamanzi, ilaphu leyiloni elitofotofo kunye nokutywina komphetho kwimfudumalo. Inomgangatho ogqwesileyo wokugcina umoya kunye nokugcina ukufudumala, qinisekisa ukuba uya kukwazi ukonwabela ukufudumala okukhethekileyo ngelixa ugcina ukusebenza kwakho kwincopho ngeendlela ezininzi ngokuhamba okungathintelwanga!
I-SMART HEAT ACROSS BODY- Fudumeza ngokukhawuleza kwimizuzwana, i-4 carbon fiber izinto zokufudumeza zivelisa ubushushu kwimimandla engundoqo yomzimba (isisu sasekhohlo nasekunene, ikhola kunye naphakathi); Lungisa iisetingi ezi-3 zokufudumeza (Phezulu, phakathi, phantsi) ngonqakrazo olulula lweqhosha.
ULAWULO OLUHLAZIYIWEYO-ISILIVA esitsha se-mylar Lining sisebenzisana nolusu, yeyona nkqubo i-POLY HEAT SYSTEM, iqinisekisa ukuba awulahlekelwa bubushushu obagqithisileyo kwaye wonwabele ukufudumala ngakumbi kunamanye amalaphu afudumeleyo kwimarike. UKUSHISA UKUYA KWI-12 ZEYURE ZOKUSEBENZA ngebhetri ye-5200mAh eqinisekisiweyo.
UMGANGATHO WOKUGQIBELA- Umgangatho ophezulu wehardware kunye ne-zip yeYKK engenamanzi, iipokotho zokufikelela ngokulula kunye ne-hood enokutsalwa yenzelwe ngokukodwa intsasa ebandayo kunye nokhuseleko olongezelelekileyo kwiintsuku ezinomoya.
Ukhetho olufanelekileyo nolufudumeleyo kuwe, amalungu osapho lwakho, abahlobo kunye nabasebenzi ukonwabela imisebenzi yangaphandle enjengokuhamba ngekhephu, ukuhamba ngesithuthuthu, ukunyuka intaba, inkampu, ukuhamba intaba, ukuskiya, ukuloba, ukuzingela okanye ukuhlala esihlalweni kunye nokusetyenziswa kweshishini ngexesha lokuwa kunye neenyanga zasebusika ngokuchasene nokubanda nokubanda Imozulu.
Ishaja yeBattery ephindwe kabini ene-US, i-EU, i-UK kunye neAU iplagiwe kukhetho.
KOMATSHINI KWI-WASHABLE-Iphakheji ibandakanya i-1 * isinxibo eshushu se-unisex, 1pcs * Ingxowa yokuhlamba impahla, 1pcs * ibhegi ye-PE, 1pcs * itshaja, 1pcs * incwadana, 1pcs * i-desiccant, 1pcs * iibhetri.
Ukuba nangasiphi na isizathu, awonwabanga ngempahla yethu eshushu, nceda unxibelelane nathi kwaye siya kujongana nayo ngokukhawuleza.
Egqithileyo Impahla yangaphantsi eshushu
Okulandelayo: UMSINDISI weGlavu yangaphandle yoKhuselo lwaManzi engenaManzi yokuSkiya, i-Snowboarding
I-5V yambatho eluhlaza okwesibhakabhaka
Wt003 phantsi ibhatyi
Iibhatyi ezantsi WT001